Homeसमाचारकार्यालय समयमा टिकटक बनाएर बस्ने ११ सरकारी कर्मचारीको जागिर गयो
December 20, 2020 admin समाचार 5060
नेपालमा टिकटक एकद’मै लोकप्रिय छ । यसले घरभित्र रहेका प्रतिभा बाहिर निकाल्ने र उजागर गर्न स’हयोग गरेको छ । टिकटकका फाइदा सँगै बेफाइदा पनि धेरै छन् । टिकटक पनि अन्य चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ईन्स्टाग्राम, स्काईप जस्तै चर्चित भएको छ । अझ कलाकारिता मन पराउ’नेहरुको लागि त राम्रा थलो मध्ये एक हो टिकटक ।
अहिलेका युवा पुस्तामा टिकटकको ‘क्रेज बढेको छ । यो एपमा हामीले विभिन्न आवाजहरुमा न’क्कल गर्न सक्छौँ । बच्चा देखि लिएर बुढापाकाहरु समेत यस एपको लत’मा परेका छन् । हामीले आज यही एपले गर्दा घटेको एक रो’चक कुरा गर्न गइरहेका छौ । यो घटना हो भारतको अहिले त भारतमा टिकटक बन्द भै सकेको छ । चाइनासँग विवाद पछि चाइनिज एप भन्दै भारतले टिक’टक बन्द गरेको हो ।
तर बन्द हुनु अघि भारतको तेलं’गाना खम्मम नगर निगमले आफ्ना ११ जना कर्मचा’रीलाई कार्यालय समयमा टिकटक भिडियो बनाएर समय बिताएको भन्दै तलब क’टौती गर्ने तथा सरुवा गरेर नदिने तथा जागिरबाट निकाल्लेसम्मको का’रवाही गरेको छ । करारमा भर्ना गरिएका ११ जना महिला र पुरुष कर्मचारीको त’लब कटौती गरी सरुवा गर्ने आदेश निगम प्रमुखले दिएका हुन् ।
कार्यालय सम’यमा पनि टिकटक भिडियो रेकर्ड गरिरहेको बेला उनीहरु पटक पटक फेला परेका थिए । यती मात्र नभएर उनीहरुले बनाएको भिडियो सोसल मिडि’यामा भाइरल हुनुका साथै टेलिभिजनमा समेत समाचार बनेको थियो । यसरी कार्यालय समयमा भिडियो बनाएर कार्यालयको बेइ’ज्जत गरेको बताउदै उनीहरुलाई सो स’जाए सुनाइएको थियो ।-इताजा खबरबाट
June 20, 2021 admin समाचार 2867
गत सातादेखि नि’रन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य आजपनि रोकिएको छैन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासं’घका अनुसार आज आइतबार सुन प्रति’तोला ८०० रुपैयाँले घटेर ९० हजार रुपैयाँमा झरेको हो । त्यसो त गत बुधबारदेखि निरन्तर ओ’रालो
October 1, 2020 admin समाचार 9758
एउटा सिक्काको मूल्य २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ! आ’खिर के थियो त्यो सिक्काको विशेषता ?
June 10, 2021 admin समाचार 3248
एउटा सिक्काको मूल्य कति पर्ला ? सामा’न्यतया सिक्काको मूल्य त्यही सिक्कामै लेखि’एको हुन्छ । अमेरिकामा यस्तै एउटा सिक्का अहिले चर्चामा छ । यो सिक्का २० डलरको सिक्का हो अर्थात यसमा ले’खिएको मूल्य २० डलर अर्थात
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220373)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212028)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211727)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210479)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209267)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208390)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206868)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206657)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175565)